Ukukopa umxholo akulungile | Martech Zone
Ukukopa umxholo akulungile
NgoLwesithathu, Juni 8, 2011 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Okokuqala i-disclaimer: ndinguye hayi igqwetha. Kuba andilogqwetha, ndiza kubhala esi sithuba njengoluvo. Kwi-LinkedIn, a ingxoxo uqale ngalo mbuzo ulandelayo:
Ngaba kusemthethweni ukuphinda uthumele amanqaku kunye neminye imixholo endiyifumana ifundisa kwibhlog yam (ewe inika ikhredithi kuye umbhali) okanye kufuneka ndithethe nombhali kuqala…
Kukho impendulo elula kule nto kodwa ndaye ndatyikitywa ngempendulo yabantu kwincoko. Uninzi lwabantu luphendule ngengcebiso leyo, ewe, zomthetho Ukuphinda uthumele amanqaku okanye umxholo abawufundileyo kwiibhlog zabo. Ukubuyisela amanqaku? umxholo? Ngaphandle kwemvume? Ngaba ungamandongomane?
Impikiswano yezomthetho iyaqhubeka kwinto yokusebenzisa ngokufanelekileyo nokuba ikude kangakanani ilungelo lokushicilela elikhusela inkampani okanye umntu ukuba umxholo wakho ufumaneka kwenye indawo. Njengomntu obhala itoni yomxholo, ndinokukuxelela ngokuqinisekileyo ukuba ayilunganga. Khange nditsho ukuba akukho semthethweni… bendisithi kunjalo Ephosakeleyo.
Okumangalisayo kukuba, Tynt undibonelela ngezibalo ukuba umxholo wam ukhutshelwa ngaphezulu kwe-100 ngosuku ngabakhenkethi. 100 times ngemini !!! Lo mxholo usasazwa rhoqo nge-imeyile… kodwa eminye yawo uyenza kwiisayithi zabanye abantu. Eminye yemixholo ziisampulu zekhowudi- mhlawumbi ezenza iiprojekthi zewebhu.
Ngaba ndiyawuthumela umxholo wam? Ewe… kodwa rhoqo ngemvume okanye ngokulandela umgaqo-nkqubo wesiza esidale umxholo. Nceda uqaphele ukuba anditshongo imbeko. Ukuphosa umxholo ongasemva kumxholo owuposileyo akuyiyo imvume… kufuneka unikwe imvume ngokucacileyo. Ndihlala ndiba neenkampani zetekhnoloji yokuthengisa zindibeka kwiqonga okanye isoftware yazo… kunokuba ndenze umsebenzi onzima wokubhala uphononongo olupheleleyo, ndihlala ndibabuza ngezinto ezibalaseleyo abangathanda ukuzenza kwisithuba. Bababonelela… ngemvume ebekiweyo yokupapasha.
Ngaphandle kwelungelo lokushicilela, ndiye ndithande ukuphazama ecaleni kokusebenzisa i-Creative Commons. Iimpawu eziqhelekileyo ichaza ngokucacileyo ukuba ngaba umsebenzi okwisiza unokukhutshelwa unikezelo kuphela, ngaphandle kokubonisa, okanye nokuba ufuna imvume eyongezelelweyo.
Ngexesha apho lonke ishishini liba ngumshicileli womxholo, isilingo sokukopa kunye nokuncamathisela iposti kunye nomxholo womnye umntu womelele. Sisenzo esinobungozi, nangona kunjalo, esiya kuba semngciphekweni ngemini (buza nje iibhlog ezibekwa ityala Ilungelo). Nokuba ityala liyasebenza na okanye hayi… ukwenza ukuba iimpundu zakho zirhuqelwe enkundleni kwaye kufuneka ufune igqwetha eliza kukukhusela kudla ixesha kwaye kuyabiza.
Kunqande ngokubhala umxholo wakho. Ayisiyonto ikhuselekileyo yokwenza kuphela, ikwayinto entle ukuyenza. Sityalile ixesha elininzi kunye nomzamo ekuphuhliseni iisayithi zethu (njengoko zinjalo neenkampani ezininzi). Ukuba umxholo wakho uphakanyisiwe kwaye ubonisiwe kwenye indawo ... ukutsala ingqalelo yomibini kwaye ngamanye amaxesha neerhafu… kucacile.
umfanekiso: Imifanekiso yebhodi ebhodi yeBart Simpson - Umfanekiso
I-Q & A: Ukuyila ngokutsha iiForam zoShishino
Iliso elimnyama likaGoogle Panda
Jun 9, 2011 ngo-4:45 AM
Dude unyanisile ngokupheleleyo kulo lonke elisemthethweni vs engalunganga. Akulunganga kwaye akukho mthethweni kwezinye iimeko. Ndifunde ezinye iindawo ukuba i-10 ukuya kwi-20% ilungile ngekhredithi + ikhonkco, kwaye konke kuxhomekeke kumxholo. I-Satire, "iikholaji" kunye nolunye uhlobo lwezinto zifumana ububele obungakumbi.
Kodwa kufuneka nditsho ukuba imvume iyimfuneko kuphela ukuba "uthumela kwakhona" yonke into okanye inxalenye enkulu yayo.
Umzekelo, ukuba ndibhala isiqwenga kwimidiya yoluntu kwaye ndifuna ukukucaphula, Douglas Karr kwaye isithuba sam ngama-600 - 1200 amagama omzekelo ... kwaye ndifuna ukusebenzisa isicatshulwa kwenye yezithuba zakho ndiya kusebenzisa isicatshulwa kwaye ndibonelele ngemfanelo ngaphandle kokucela imvume.
Emva kwayo yonke loo nto uyithumele kwi-intanethi kwaye ngoku "ungumntu woluntu" kwaye ukuba bekufuneka ndicele imvume kuye nabani na endimcaphulayo, ukuthumela into ethile kuya kuba yinto engenakwenzeka-abanye abantu bathatha iintsuku, iiveki okanye bangaphenduli. Kodwa qaphela indawo malunga nenani lamagama… Isicaphulo sinokuba sisivakalisi esinye… 1 max ngoko inokuba sisivakalisi esinye kwizivakalisi ezingama-2 ukuya kuma-1.
kwaye… andililo igqwetha okanye nantoni na ngoko ke oku kunjalo, kakhulu luluvo lwam.
Jun 9, 2011 ngo-10:12 AM
Kananjalo akulunganga ukwenza imashups ye-OPC (umxholo wabanye abantu). Yipropathi yobukrelekrele okanye imbono ekhuselweyo. Hayi nje amagama. Hayi...
Juni 9, 2011 ngo-2: 29 PM
Ndiyavuma. Ingakumbi xa i-website ye-mashup, okanye inqaku liyi-mashups.
Juni 12, 2011 ngo-10: 32 PM
Uziva njani ngezicatshulwa? Ndihlala nditsala umhlathi kwiblogi endiyifumanayo enomdla okanye ekhuthazayo njengesiseko senqaku elitsha. Ndihlala ndibandakanya amakhonkco angasemva kunye nekhredithi.
Juni 13, 2011 ngo-7: 16 PM
Asiyondlela endiziva ngayo ngabo, Lorraine… yindlela umnini sayithi aziva ngayo. Izicatshulwa zisakopa umxholo - akukhathaliseki ukuba zincinci kangakanani izinto. Abaxhasi banokuthi isicatshulwa 'sisetyenziswe ngokufanelekileyo' ukuba wenza izinto ezifana nokufundisa abanye. Nangona kunjalo, abo bethu abaneblogi eyakha uphawu lwethu kunye neshishini lethu lifumana inzuzo kwezo zicatshulwa. Nokuba loo nto ayithanga ngqo, unokuzifumana umangalelwa.
Juni 13, 2011 ngo-8: 14 PM
Ndicinga ukuba isicatshulwa sisoloko sisetyenziswa ngokufanelekileyo. Ingxaki kukuba abantu bayisebenzisa kakubi kwaye baxhaphaze yonke ingcamango yokusetyenziswa ngokufanelekileyo. Umbuzo wokuba yintoni na isicatshulwa kunye nendlela esisichaza ngayo eyona nto ibalulekileyo apha.
Ukusetyenziswa ngokufanelekileyo kuchazwe ngokucacileyo kwaye kufuneka ufunde ukuba yintoni ukusetyenziswa ngokufanelekileyo okuthethayo. Icaciswe kakuhle apha: http://en.wikipedia.org/wiki/Fair_use
Kukho iindlela zobugcisa zomnini wesiza ukuba abonelele ngesicatshulwa, kwaye ukuba umbhali ubonelela oko ngesondlo sabo ngokomzekelo, kuyaqondwa ukuba le *sisicatshulo* akukho kuthi njengeebhlogi ukuba "sikhethe kwaye sikhethe" ngowuphi umhlathi esifuna ukuwusebenzisa njengesicatshulwa.
Ukuba isicatshulwa asichazwanga, ngoko ke ndicinga ukuba kulungile ukusebenzisa isicatshulwa kwinqaku ukunika umxholo wokubhala kwakho kunye nokubonelela ngekhonkco. Qiniseka ukuba inqaku lakho leloqobo kwaye isicatshulwa / isicatshulwa sikhona kuphela ukwenza inqaku okanye ukucaphula umntu. Kufuneka ibe yinxalenye encinci yenqaku ngoko ayikokukopa okanye ukuphinda iphinde ichaze kwakhona, kodwa kufanele iwele kuhlelo, ukugxeka, ukuhlekisa kunye nezinto ezithandwayo.
Ihlala ibuyela kubuninzi bamagama asetyenziswayo kwinqaku lokuqala kwaye ubhala kangakanani ukongeza ixabiso kwincoko okanye isihloko? Okanye ngaba uphinda ubhale kwakhona into ethethwe ngomnye umntu kwaye ngaba inqaku lakho lisekelwe kuphela kwaye phantse ngokupheleleyo kulo mbhalo? ukuba awongezi ixabiso, ndingabuza ukuba wenza ntoni. Ukuba kwelinye icala, ucaphula umntu okanye inqaku labo ukuxhasa uluvo lwakho ngokomzekelo emva koko uye kuyo. Kuya kuzisa ukuvezwa ngakumbi kwinqaku lokuqala kwaye ukuba ibhlogi ekuthethwa ngayo ikuyo ukwenza imali ekubhaleni kwayo, oku kuya kunceda kuphela.
Juni 13, 2011 ngo-8: 28 PM
Ucela umngeni eyakho inqaku, Oscar… kwaye uyandixhasa. Undoqo kulo mba kukuba AKUKHO mfuneko ithile engqinayo okanye ephikisayo ukuba yintoni kanye kanye “ukusetyenziswa ngokufanelekileyo”. Inani lamagama alinanto yakwenza nalo (Bona: http://www.eff.org/issues/bloggers/legal/liability/IP) Ukuba uyamangalelwa… uya enkundleni kwaye kulapho kugqitywe khona. Ngelo xesha, uqikelelo lwam kukuba sele uchithe ixesha elininzi kwaye mhlawumbi nemali. Lilizwi lam lesilumkiso elo – iibloggers kufuneka zilumke.
Juni 15, 2011 ngo-12: 35 PM
Njengomphuhlisi, ndibona le ndlela rhoqo ngeeblogi zomphuhlisi. Abaphuhlisi baya kuthatha ikhowudi kwindawo efana ne-Microsoft Developer Network (MSDN), bayifake kwisithuba sabo, basilele ukubonelela ngereferensi yokuba umthombo uvela phi kwaye emva koko baphawule ngekhowudi ngokungathi yeyabo. Ngelixa bengatsho ngokucacileyo ukuba ngumsebenzi wokuqala, abawukhankanyi nomsebenzi. Oku kukushiya unoluvo lokuba ngumsebenzi wokuqala kwaye banegunya kulo mbandela.
Wonke lo mxholo ubuyela ngokwenene kwinto esiyifundileyo sonke, okanye ebesifanele ukuba siyifundile, kwisikolo samabanga aphakamileyo malunga nokucaphula omnye umsebenzi kunye nokukopa. Ngelixa isenokubonakala ingenabungozi kwabaninzi, ayinasimilo. Nokuba ipowusta iyayifumana imvume yokuphinda uthumele umxholo, basenesibophelelo sokucaphula umthombo wabo.
Aug 29, 2011 ngo-7:45 PM
Funda inqaku lakho ngomdla omkhulu, ndicinga ukuba uninzi lwethu lunetyala lokuthumela / lokushicilela umxholo onamalungelo okukopisha kunye nemvume yomnikazi.
BTW, ndizibuza nje, ngaba ufumene imvume yokuthumela umzobo kaBart Simpson?
Aug 29, 2011 ngo-9:23 PM
Ewe, uyakubona ireferensi yomzobo osemazantsi - osetyenziswe ngemvume okoko bekukho ireferensi kwinqaku elibuyela kwindawo yabo. 🙂
Oktobha 31, 2011 ngo-8: 09 PM
Olunye uhlaziyo koku - kubonakala ngathi iRighthaven inokuba iphumile kwishishini kungekudala. Ushicilelo olubi kunye nokusebenza kakubi kwenkundla kukwenza ngombulelo!
Okt 31, 2013 ngexesha 4:57 AM
Ndinomdla wokwazi, ukuba umxholo ukhutshelwe kwenye ibhlog kwiwebhusayithi. . . kwaye i-blogger ke iyacaphuka, icela ukuba umxholo ususwe. . . umxholo uyasuswa ngoko nangoko KWAYE kuthunyelwe uxolo . . . Ngaba i-blogger ke inelungelo lokumangalela?
Enkosi kwaye ndijonge phambili ukuva umva kuwe
Okt 31, 2013 ngexesha 9:35 AM
Ewe, Kelsey. Ubusela bubusela, ukucela uxolo emva kokuba ubanjiwe akutshintshi inyani. Oko kwatsho-andizange ndisukele ukulandela nabani na ngokusemthethweni emva kokuba eyisusile.